Ụfụfụ Acoustic, Ihe mgbochi ụda, Acoustic Diffuser - Vinco
Ọtụtụ narị ndị ahịa juru afọ
ANYỊ NA -AGBANYE
Nkebi na -agagharị agagharị
onye bu vinco
Shenzhen Vinco Soundproofing ihe Co., Ltd bụ ọkachamara na ihe mkpuchi ụda ruo ọtụtụ afọ ma na-enye R&D, mmepụta, ahịa na ọrụ ịre ahịa nke ngwaahịa.
Ngwaahịa Vinco na-ekpuchi nkebi ọrụ, ogwe mmiri na-adịghị mma, ụfụfụ na-ada ụda, mkpuchi mgbidi, mkpuchi ala, mkpuchi mkpuchi ụlọ, mkpuchi ọkpọkọ, ogwe ụda, mkpuchi mkpuchi, ogwe na-adọrọ ụda, ihe mkpuchi, afụfụ na-emetụta ụda na wdg.
Vinco lekwasịrị anya n'ike obodo ka ọ na -ele ụwa anya, duo maka ihe ọhụrụ siri ike, ogo a pụrụ ịdabere na ya na arụmọrụ ọnụ ahịa dị elu, ngwaahịa ndị Vinco na -ewu ewu na ndị ahịa.
Anyị nwere igwe na -ejikwa kọmputa na -akpaghị aka yana ndị ọrụ aka ọrụ ọkachamara iji hụ na ngwaahịa anyị dị oke mma. Ire anyị na -ere kwa afọ nwere ike iru ihe ruru mita 500,000 nke ihe mkpuchi ụda, ngwaahịa akustic, nkebi a na -ebugharị ebugharị, ihe mejupụtara. Mmadụ Bịa na ileta ụlọ ọrụ anyị iji wuo mmekọrịta ọnụ ahịa azụmaahịa ogologo oge. Anyị ga -enye gị ọrụ kacha mma, ezigbo mma na ọnụahịa asọmpi.
• 2015 — Mgbasawanye nke mmepụta ihe, ire ahịa kwa ọnwa nke ihe karịrị square mita 200,000 nke ihe na -ada ụda
• 2012 — Ụlọ ọrụ a nwere ọtụtụ mkpesa ule egwu.
• 2011 — A na -ere ngwaahịa ụlọ ọrụ n'ụwa niile.
• 2009 — Enwetara Asambodo SGS, CE, CMA, ilac-MRA, CNAS.
• 2007 — Mmeghe nke ụlọ ọrụ ihe mkpuchi mkpuchi ụda Vinco na Shenzhen wee bido imepụta nnukwu ihe.
• 2003 — Guzosiri ike Shenzhen Vinco ụlọ ọrụ ihe na -eme mkpọtụ.
Ogo bụ otu n'ime ihe kacha mkpa.
Na -emeziwanye ọkwa njikwa ka ndị ahịa nwee obi ike.
Na -achịkwa nke ọma dịka ụkpụrụ si hụ na 100% ruru eru maka ịdị mma mbupu.
GS SGS OA
Ọhụụ:Ịbụ enyi tụkwasịrị obi nke ndị ahịa ụwa niile. Iji nyefee uru kachasị maka ndị ahịa, ndị ọrụ na ndị na -ekenye ihe.
Mission: Iji nye ọrụ dị elu, nke na-abịa n'oge yana afọ ojuju maka nrụpụta na mgbakọ panel acoustics.
nke ụlọ ọrụ anyị na -arụ ọrụ
Ngwaahịa Vinco na-ekpuchi nkebi ọrụ, ogwe mmiri na-adịghị mma, ụfụfụ na-ada ụda, mkpuchi ụda mgbidi, mkpuchi ala, mkpuchi mkpuchi ụlọ, mkpuchi ọkpọkọ, ogwe ụda, mkpuchi mkpuchi, ogwe na-adọrọ ụda, ihe mkpuchi, afụfụ na-emetụta ụda na wdg.
kedu ka anyị mere
Nchekwa ụgbọ njem na-emetụta ụda, ụzọ ndozi na ụzọ nhicha kwa ụbọchị
Uru iri nke ngwaahịa bọọdụ na-emetụta ụda
(1) Mmiri na-egbochi mmiri na ihe mgbochi mmiri. Nsogbu nke ngwaahịa osisi bei ...
Gịnị bụ teknụzụ ihe owuwu nke bọọdụ na-amị ụda?
1. Gịnị bụ usoro iwu bọọdụ na-amị ụda? C ...
Kedu ka esi amata ịdị mma nke ogwe na-amị ụda? Naanị lelee akụkụ 6
Ogo nke ogwe na-amị ụda na-ekpebi ụda na-amịpụta ...
Ihe ọmụma mkpuchi ụda
Kedu otu esi ahọrọ ihe egwu? Na ụdị ejiji dị iche iche
Ihe atọ a na -ahụkarị ngwa ngwa ihe akụrụngwa (ọkachasị na -ezo aka ...
Nkwadebe ndị mbụ maka ịwụnye ogwe osisi na-ada ụda
Ihe na -esonụ bụ ọrụ nkwadebe maka nrụnye woode ...
Kedu otu esi ahọrọ ihe mkpuchi ụlọ?
Ụzọ mkpuchi mkpuchi ụda ise nkịtị, nke ọ dị mkpa ka emegharịa ya ...
Kedu otu esi eme mgbidi mkpuchi n'ime ụlọ? Kedu ụdị mgbidi na -anaghị ada ụda dị mma?
Kedu otu esi eme mgbidi mkpuchi n'ime ụlọ? 1.Idebe nke na -agbanwe ...
Ime ụlọ na -eji mmetụta mkpuchi ihe dị mma dị mma?
Enwere ọtụtụ ihe mkpuchi ụda n'ime ụlọ, enwere als ...
Ogwe na-adọta ụda nwere ihe pụrụ iche ndị ahụ
Ụdị nke mbụ na-emetụta ụda bọọdụ-polyester eriri na-ada ụda ...